कसरी वजन घटाने काम गर्दछ? - हामी शरीर बुझ्दछौं
कसरी वजन घटाने काम गर्दछ?
तौल घटाउने प्रभावी तरीकाहरु तौल घटाउने (वा बोसो जलाउने) तब हुन्छ जब शरीर उर्जा उत्पन्न गर्न को लागी उपलब्ध निक्षेप को उपयोग गर्न थाल्छ। उसलाई यो गर्न को लागी सजिलो छैन। यो खाना बाट खपत क्यालोरी को कमी सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो शरीर मा ऊर्जा को कमी को कारण हो, जो यो बोसो संग भरीनेछ।
त्यहाँ ऊर्जा स्रोत को2प्रकार छन् - glycogen र बोसो। पूर्व कन्वर्ट गर्न को लागी धेरै सजिलो छ, त्यसैले शरीर पहिलो यो प्रयोग गर्दछ। यो यस कारणले हो कि कुनै कसरत कम्तीमा आधा घण्टा सम्म रहनु पर्छ, अन्यथा यो मामला बोसो जलाउन पुग्दैन।
वजन घटाउने अवस्था
बोसो शरीर को एक रिजर्व हो, त्यसैले यो उनीहरु संग भाग को लागी अनिच्छुक छ। साथै, उनीहरु कम से कम मध्यम भार संग मात्र उपभोग गर्न को लागी शुरू हुन्छ, त्यसैले कसरत लामो छ र आवश्यक लोड प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ उपकरणहरु छन् कि यी प्रक्रियाहरु लाई गति गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, Phyto Liposaktor वजन घटाने को लागी ड्रप। उनीहरु, अन्य बोसो जलाउने औषधिहरु जस्तै, लिपिड चयापचय को गति र बोसो को खपत को लागी जिम्मेवार हार्मोन को उत्पादन मा वृद्धि।
कसरी तौल घटाउने हो?
सुरुमा, हाम्रो शरीर मात्र पानी गुमाउँछ, तेसैले जब तपाइँ व्यायाम वा उचित पोषण बन्द गर्नुहुन्छ, तौल तुरुन्तै फर्कन्छ। एक सानो पछि, मांसपेशिहरु को मात्रा कम गर्न थाल्छ। यो प्रक्रिया कोर्टिसोल, एक तनाव हार्मोन को रिलीज संगै छ। तेसैले, चिडचिडापन बढ्यो, शक्ति को हानि।
तेसैले, तौल घटाउँदा, तपाइँ पुनः सुचारु गर्न को लागी समय को लागी अधिक सुत्न को लागी आवश्यक छ। चयापचय क्रम मा अन्त मा अन्त मा यस स्तर मा एक पैर जम्मा गर्न को लागी।
सामान्य मा, तौल गुमाउने प्रक्रिया3चरणहरु मा विभाजित गर्न सकिन्छ:
छिटो वजन घटाने (पानी र मांसपेशिहरु टाढा जान्छन्);
ढिलो वजन घटाने (बिस्तारै बोसो जलाउन सुरु हुन्छ);
फिक्सिंग चरण (त्वरित चयापचय नयाँ मोड मा काम रहन्छ)।
यो आशा गर्न गलत छ कि तपाइँको तौल समान रूप मा जान्छ। तर धेरै, ध्यान दिएर कि वजन घटाने व्यावहारिक रूप मा रोकिएको छ, अन्तिम परिणाम को लागी पर्खने शक्ति छैन।
बोसो जलाउने प्रविधिहरु
प्रारम्भिक तौल घटाउने उपायहरु के के हुन्? सन्तुलित आहार र व्यायाम को एक संयोजन सबै भन्दा राम्रो छ। कम क्यालोरी आहार मात्र मेटाबोलिज्म सुस्त, उपवास जस्तै। कसरत को, शक्ति प्रशिक्षण सबैभन्दा खराब छ। तेसैले, यो एरोबिक व्यायाम मा ध्यान दिन लायक छ: दौड स्विमिंग साइकल हिड्ने
शरीर मा पानी को एक पर्याप्त मात्रा मेटाबोलिक प्रक्रियाहरु लाई तेज गर्न सक्छ। तपाइँ पानी सन्तुलन सुधार गर्न को लागी दैनिक लगभग 8 गिलास पिउन को लागी आवश्यक छ। शरीर चिसो पेय उपभोग गर्दा अधिक क्यालोरी जलाउनु पर्छ, तर तपाइँ यहाँ जोसिलो हुनुहुन्न।
मेटाबोलिक प्रक्रियाहरु खाना मा तातो मसला को उपस्थिति संग छिटो जान्छ। औषधिहरु पनि यहाँ मद्दत गर्न सक्छन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ औषधि Phyto Liposaktor को बारे मा डाक्टरहरुको समीक्षा पढ्नुहुन्छ, तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरु केटीहरु लाई यो विशेष उपाय संग वजन कम गर्न को लागी सल्लाह दिन्छन्। यसले पाचन पथलाई सामान्य बनाउँछ, शरीर सफा गर्दछ र बोसो जलाउने प्रक्रियाहरु लाई सक्रिय गर्दछ।
तौल घटाउने ठूलो मांसपेशी जन संग मानिसहरु मा छिटो छ। तेसैले, यो नियमित व्यायाम को समयमा एकै समयमा निर्माण, त्यसैले तपाइँ चयापचय प्रक्रियाहरु शुरू गर्नुहोस्।
कुनै पनी तरिका मा भारी वजन घटाने भन्दा पहिले, एक डाक्टर को परामर्श आवश्यक छ!
तौलिया रोलरको साथ स्लिमि:: समीक्षा, विवरण
कसरी वजन घटाउन मनोवैज्ञानिक मा ट्यून गर्ने। वजन कम गर्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
घरमा वजन कम गर्नु अघि शरीर कसरी सफा गर्ने: उपचार, समीक्षा
घरमा खाना खाए बिना कसरी वजन कम हुन्छ? बिना भोजन को स्लिम
पछिल्लो नुन मुक्त जापानी आहार - प्रभावी ढंग बाट तौल घटाउने
अर्को पानी आहार - तनाव बिना5किलो घटाउनुहोस्
81 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,786 प्रश्नहरू।